Soft 3D Foam Bicycle Saddle Seat Cover - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်း ၀ ယ်ပါ WoopShop®
soft 3D ရေမြှုပ်စက်ဘီးကုန်းနှီးထိုင်ခုံအဖုံး
$6.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $10.99
အရောင် Black က ပြာသော အနီရောငျ
Black က ပြာသော အနီရောငျ
ပျော့ပျောင်းသော 3D Foam Bicycle Saddle ထိုင်ခုံအဖုံး - အနက်ရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Shell ကပစ္စည်း: ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ
မော်ဒယ်နံပါတ်: ZSW0072 စက်ဘီးကုန်းနှီး
Size: 28.5cm x ကို 17.5cm x ကို 2cm
အမျိုးအစား: ရှေ့ထိုင်ခုံ Mat
feature ကို: အနီးကပ်အရေပြား၊ ရှင်သန်နိုင်သော Bicycle Saddle, ချွေး၊ ပွန်းပဲ့ခြင်း၊ နူးညံ့သော Mtb Saddle ကိုစုပ်ယူပါ
အရောင်ရွေးချယ်မှု: ခမရှိခြင်း, အနီရောင်, အပြာရောင်ကုန်းနှီးစက်ဘီး
စက်ဘီး Cushion Shell ကပစ္စည်း: S ကိုponge ဆိုင်ကယ်ထိုင်ခုံအဖုံး
အလေးချိန်: 50g လမ်းမကြီးစက်ဘီးထိုင်ခုံအထက်
ဘို့: ယောက်ျား, မိန်းမ, ကလေးကလေးတွေ
အသုံးပြုသူကို: လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်ကုန်းနှီး၊ ကလေးထိုင်ခုံ
အဘို့အ fit: Mountain Bike, MTB လမ်းဆိုင်ကယ်၊ ကလေးဆိုင်ကယ်
package ပါဝင်သည်: 1 x စက်ဘီးကုန်းနှီးထိုင်ခုံအဖုံး
ခရီးဝေးသွားရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု! အခြေခံလိုအပ်ချက်များစီးနင်း! မျက်နှာပြင်သည်ချောခြင်းနှင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်အထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကော်အားဖြင့်ထည်ကို အသုံးပြု၍ အတွင်းပိုင်းအလွှာနှင့်ကှနျ့ကိုသူတို့တပ်ဆင်ပြီးနောက်ထိုင်ခုံနှင့်မလျှောစေရန်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်ကြသည်။
အလယ်အလွှာကို GEL silicone ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အဓိကပစ္စည်းအဖြစ်၎င်းသည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးကာမဂုဏ်ခံစားခြင်း၊ သင်၏တင်ပါးကိုကာကွယ်ခြင်း၊
Ergonomics ဒီဇိုင်း, စုံလင်သောမထိုက်မတန်တင်ပါး
pasuje idealnie.jak sie poprawi pogoda przetestujęfunkcjonalność i napiszę jakie wrażenia :) ။
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်
အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောပစ္စည်းမှထုတ်လုပ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းသည်အလွန်နူးညံ့။ ကြံ့ခိုင်မှုမရှိသောကြောင့်အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်အလွန်ကျေနပ်သည်။ ထိုင်ခုံပေါ်တွင်ကောင်းစွာကိုက်ညီသည်။
Спасибобольшоэ !!! Прадавцаимагазинрекомендую !!! Продавецобшительныйиотзивчивый။ Всёокпришло !!!
အစားထိုး 30.11, 01.01. XNUMX ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ယူခရော့ရှော့ဖ်၊ ох.ох.є။ .охалеве,ох။ ,,, .охохох Невсімпідійде။ Уважнодивітьсярозміривописі !!!